Abakhiqizi nabahlinzeki be-Fiber Optical Transmitter | China Fibre Optical Transmitter Factory
I-Mini Optical Transmitter (ZTX1310M / ZTX1550M)
Incazelo yomkhiqizo I-CATV Model ZTX1310M / ZTX1550M Transmitter channel CATV VSB / AM isixhumanisi sevidiyo sinikeza isisombululo sesimanje sokudluliswa kwekhwalithi ephezulu ye-CATV. IModeli ZTX1310M / ZTX1550M inikeza umkhawulokudonsa we-analog ohlukile osuka ku-45 kuye ku-1000MHz ovumela ukudluliswa kwawo wonke ama-sub-band, low-band, FM, mid-band, neziteshi zebhendi ephezulu. Lesi sici sivumela isistimu ukuletha izinsizakalo zevidiyo ezenzelwe amakhasimende. Ngokubambisana ne-VCR, i-camcorder, noma ikhebula lokuphakela ithelevishini, imodeli ZTX1310M / ZT ...
Incazelo yomkhiqizo I-ZTX1800 uhlobo olujwayelekile lwe-high-performance 1550nm modulation transmitter transmitter enikezela ngokusebenza okuphezulu kokushintshwa kwamandla kagesi. Umthombo wonke wokukhanya weyunithi usebenzisa umkhawulokudonsa omncane, umsindo ophansi, i-wave eqhubekayo ye-DFB laser, okulungele ukunciphisa ithonya lokuhlakazeka. Ngenxa yokwamukelwa komkhiqizo wamazwe omhlaba wezinto ezisemqoka kanye nobuchwepheshe bethu bokulawula ukusebenza kohlelo lwenkampani, ubuchwepheshe bokulawula inethiwekhi ye-SMNP, ubuchwepheshe bezobuchwepheshe bomshini ...
1310nm Fibre Optical Transmitter (ZTX1310)
Incazelo yomkhiqizo I-ZTX1310 chungechunge i-1310nm transmitter optical uhlobo lwekhwalithi ephezulu yokuhambisa i-optical ngomsebenzi we-AGC. Ukuphakama kwesidlulisi yi-IU, kungabekwa kufreyimu eyi-19 ”kahle. Amadivayisi amakhulu asebenzisa i-AOI, i-EXSTON noma i-Ortel DFB umsindo ophansi oqukethe isiqandisi se-thermoelectric, i-laser wave eqhubekayo. Zonke izinkomba zokusebenza kwezobuchwepheshe zifinyelela izinga elifanayo lemishini engenisiwe, linikezela ngekhwalithi yokudluliswa kwebanga elide kwezithombe, izibalo noma ukucindezela ...
1310nm Optical edluliselwe Station (ZTX1310R)
Izici 1.Yenzelwe ngokukhethekile ukunwetshwa kwamanethiwekhi we-coaxial. Inemisebenzi emibili: ukuthola umsebenzi, ukufaka esikhundleni se-optical; idlulisa umsebenzi, amandla okukhipha 2 ~ 4mW, angasetshenziswa ukusebenzisa 1 ~ 4 ama-node optical. Ukusetshenziswa kwangaphandle, izindlu ezinhle ezingafakwa emanzini, kungasebenza ezingeni lokushisa elibi kakhulu njengo -45 ° C ~ + 85. Ipharamitha yobuchwepheshe Into Yesigaba sepharamitha Isamukeli se-Optical ingxenye Thola Amandla we-Optical dBm -6 ~ + 2 (ejwayelekile -1) Amachweba wokukhipha inombolo 1/1 noma 2/0 ...
Transmitter yangaphandle (ZTX1310W)
Izici 1. Yenzelwe ngokukhethekile ukunwetshwa kwamanethiwekhi we-coaxial. 2.Ingasebenza njengombili i-node ne-transmitter encane ukusebenzisa i-1 ~ 4 node. 3. Imodeli yangaphandle, ingasebenza -45 ~ + 85 ℃. Amapharamitha Imininingwane Imininingwane Amapharamitha Okutholwa Kokuthola Okukhiphayo No. 1/1 2/0 Ukusebenza Komkhawulokudonsa (MHz) 47 ~ 862 Wavelength (nm) 1310/1550 Homo Noise Current 7 Input Power (dBm) -6 ~ +2 Typical -1 Fiber Connetor FC / I-APC Noma i-SC / UPC Optical Return Loss (dB) ≥40 Return Loss RF (dB) ≥16 Unflatne ...
1550nm Wokushintshashintsha Kwangaphakathi Optical Transmitter (ZTX1550)
Incazelo yomkhiqizo I-ZTX1550 series 1550nm transmitter optical is a standard standard of CATV transmitter optical. Ukuphakama kwesidlulisi yi-IU, kungabekwa kufreyimu eyi-19 ”kahle. Amadivayisi amakhulu asebenzisa i-Ortel, MITSUBISHI DFB umsindo ophansi oqukethe isiqandisi se-thermoelectric, i-laser wave eqhubekayo. Zonke izinkomba zokusebenza kwezobuchwepheshe zifinyelela izinga elifanayo lemishini engenisiwe, linikezela ngekhwalithi yokudluliswa kwebanga elide kwezithombe, izibalo noma isignali yedijithali ecindezelwe ...